ကိုထူးကျော်ဝင်း - Myanmar Knowledge Society
ဒီတပတ် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးရာ ဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကမ္ဘာတဝှမ်းက အတွေးအခေါ်တွေကို လက်လှမ်းမီနိုင်ဖို့အတွက် နိုင်ငံရေး၊ ဒဿနိက၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ သမိုင်း၊ စာပေတွေကို Myanmar Knowledge Society က ထုတ်ဝေနေတာလို့ ဒီအဖွဲ့ကို တည်ထောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ ကိုထူးကျော်ဝင်း က ပြောပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီဂျာနယ် အယ်ဒီတာဖြစ်တဲ့ ကိုထူးကျော်ဝင်းဟာ အမေရိကန်အစိုးရ ဖိတ်ကြားမှုအစီအစဉ်အရ ဥပဒေပြုရေးနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွေ ပညာတော်သင်အဖြစ် ဝါရှင်တန်မြို့ တော်ကို ရောက်ရှိချိန်မှာ ကိုကျော်ကျော်သိန်း (ဗွီအိုအေ) က တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။
ကိုကျော်ကျော်သိန်း ။ ။ ကိုထူးကျော်ဝင်း ဗွီအိုအေ ကိုလာပြီး တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်ပြုတာကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Myanmar Knowledge Society မြန်မာလိုဆိုရင် ဘယ်လိုခေါ်သလဲ။
ကိုထူးကျော်ဝင်း ။ ။ မြန်မာ့အသိပညာ လူ့အဖွဲ့အစည်း။ အသိပညာ မြှင့်တင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းလို့ ပြောနိုင်တယ်။
ကိုကျော်ကျော်သိန်း ။ ။ အဲဒီ အဖွဲ့အစည်းက ဘယ်တုန်းက ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးအောက်မှာ ဘယ်လို စိတ်ကူးနဲ့ စတင်ဖွဲ့စည်းလဲ။
ကိုထူးကျော်ဝင်း ။ ။ အဲဒီအကြောင်းကို စပြောမယ်ဆိုရင် ကျနော့်ရဲ့  background က RIT က။ ကျနော့်ရဲ့  Major က Architecture ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၁ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျောင်းစတတ်တယ်။ ကျနော့် သူငယ်ချင်းတွေရှိတယ်။ စာရေးဆရာ literature တွေ တောက်လျှောက်ရေးနေတဲ့ ဆရာမင်းခက်ရဲ၊ ကျနော့်သူငယ်ချင်း သော်သော်မျိုးဟန် closed friend. ကျနော်တို့တွေက YIT မှာကတည်းက စာဖတ်အသင်းတွေထောင်တယ်။ တက္ကသိုလ်များ စာဖတ်အသင်းတွေထောင်တယ်။ နောက်တခါ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ စာဖတ်အသင်းတွေထောင်ပြီးတော့ အဲဒီအထဲက စာပေနဲ့ နိုင်ငံရေးကို ချိတ်ဆက်ပြီး အလုပ်လုပ်တယ်။ ကျနော်တို့ YIT ကို base ထားပြီးတော့ ကျန်တဲ့ တက္ကသိုလ်တွေနဲ့ ချိတ်ထားတယ်။ လေးငါးခြောက်ဆယ် ရှိမယ်။ အဲဒီအထဲမှာမှ အတိုချုပ်ပြောရရင် အဲဒီလို အဖွဲ့အစည်းမျိုး လုပ်ခဲ့တယ်။ ကျနော်က စက်မှုတက္ကသိုလ်အသင်းမှာလည်း … ကော်မတီဝင်၊ အမှုဆောင်အနေနဲ့ အလုပ်လုပ်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော်တို့ စာဖတ်အသင်းထဲမှ ကိုသက်နောင်စိုး ကျနော်တို့အုပ်စုထဲက ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ တကိုယ်တော်ဆန္ဒပြတယ်။ မြို့ တော်ခန်းမရှေ့ မှာ။ ဆန္ဒပြတော့ သူ အဖမ်းခံရတယ်။ ကျနော်တို့ အုပ်စုတခုလုံး အဲဒီတုန်းက အထိန်းသိမ်းခံရတယ်။ Concentration camp ကို ရောက်တယ်။ ထောင်တော့ မကျခဲ့ဘူး။ Concentration camp မှာ တပတ်လောက် ကြာခဲ့တယ်။
ကိုကျော်ကျော်သိန်း ။ ။ Concentration camp ဆိုတာ ဘာကို ပြောတာလဲ။
ကိုထူးကျော်ဝင်း ။ ။ စစ်ကြောရေးစခန်းမှာ ကြာခဲ့တယ်။ ကိုသက်နောင်စိုး ကတော့ ထောင် (၁၄) နှစ်ကျတယ်။ နောက် ကိုခင်မောင်ဝင်း အခု M Law ကို လုပ်နေသူ။ ကိုခင်မောင်ဝင်း က အဲဒီတုန်းက (၇) နှစ်ကျတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ စစ်ကြောရေးစခန်းက ပြန်လွတ်လာတယ်။ အဲဒီမှာကတည်းက ကျနော်တို့ရဲ့  စိတ်ကူးက ဟိုအရင် အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကတည်းက နဂါးနီစာအုပ်တိုက်ကို ကျနော်တို့ အားကျတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူတွေအကုန်လုံးက နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲကို လိုလားတယ်။ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကို စနစ်တကျ သိဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ အတွေး အဲဒီအထဲကရှိတယ်။ နဂါးနီးစာအုပ်အသင်းကို သဘောကျတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ဆိုတာ နဂါးနီအသင်းက မွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ လူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေလို့ ပြောလို့ရတယ်။ ကျနော်တို့က အဲဒီထဲက စိတ်ကူးရှိခဲ့တယ်။ ကိုမင်းခက်ရဲနဲ့ ကျနော်တို့ ဝိမုတ္တိစာအုပ်တိုက် ပုံစံလေးလုပ်ပြီး သူ့စာအုပ်တွေကို အထူးသဖြင့်ထုတ်တယ်။ နောက်ပိုင်း ၂၀၁၂ ခုနှစ်လောက်မှာ ဒါရိုက်တာကိုဇော်ဦးနဲ့ သွားချိတ်မိတယ်။ ကိုဇော်ဦးကလည်း ဒီလိုစာအုပ်တိုက်မျိုး အိုင်ဒီယာရှိတတာနဲ့ ကျနော်တို့က လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရေးသိပံ္ပကို ဇောက်ချလုပ်တဲ့ စာအုပ်တိုက်တခု။ နိုင်ငံရေးစာအုပ်တွေ၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေပဲ အထူးသီးသန့်ထုတ်တဲ့ စာအုပ်တိုက်တခုထွက်ဖို့ သွားပေါင်းစည်းမိပြီး ၂၀၁၃ ဖေဖေါ်ဝါရီလောက်မှာ Myanmar Knowledge Society ကို တည်ထောင်ခဲ့တယ်။
ကိုကျော်ကျော်သိန်း ။ ။ ၂၀၁၃ ဖေဖေါ်ဝါရီဆိုတော့ (၂) နှစ်ကျော်ကျော် ရှိပြီပေါ့။ MKS က အခုန ပြောခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးသိပံ္ပ …
ကိုထူးကျော်ဝင်း ။ ။ နိုင်ငံရေးသိပံ္ပ၊ Philosophy, ဒဿနိက၊ မြန်မာစာပေ၊ သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်တွေကို အဓိကဇောက်ချထုတ်ဝေရေး လုပ်တယ်။ အဲဒီမှာ အပိုင်း (၂) ပိုင်း ရှိတယ်။ နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့အပိုင်း - နိုင်ငံရေးစာပေထုတ်တဲ့ အပိုင်းနဲ့ သမိုင်းနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ထုတ်တဲ့အပိုင်း ရှိတယ်။ သမိုင်းနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအပိုင်း အယ်ဒီတာချုပ်က စာရေးဆရာ မောင်ဇေယျ။ သူက တာဝန်ယူတယ်။ သူက (၆၀၁) ကြိမ် Myanmar Studies Journal ဆိုပြီးထုတ်တယ်။ အဲဒါက (၆) လ (၁) ကြိမ် ဘာသာနှစ်မျိုးနဲ့ ထုတ်တယ်။ အဓိကတော့ မြန်မာ့အကြောင်း လေ့လာနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသား၊ မြန်မာ Scholar ပညာရှင်တွေကို ရည်ညွှန်းတယ်။ ဟိုတုန်းက JBRS ပုံစံမျိုးထုတ်တယ်။
ကိုကျော်ကျော်သိန်း ။ ။ ကျနော် စဉ်းစားမိတာက နဂါးနီ ဆိုတာ လွတ်လပ်ရေး လှုပ်ရှားမှုကို အားပေးပြီးတော့၊ အခြေခံပြီးတော့ ပေါ်လာတယ်။ MKS က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  အခုလက်ရှိ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ရှေ့ နိုင်ငံတော်သစ် တည်ဆောက်ရေးကို ဘယ်လို အထောက်အကူပြုဖို့ ရည်ရွယ်လဲ။
ကိုထူးကျော်ဝင်း ။ ။ ကျနော်တို့ ဘယ်လို အထောက်အကူပြုလဲဆိုရင် အခုနပြောခဲ့တဲ့ ကျနော်တို့ စိတ်ကူးစိတ်သန်ကို ပြန်ပြောရင် လွတ်လပ်ရေးကာလမှာ နဂါးနီစာအုပ်အသင်းက နိုင်ငံရေးစာအုပ်တွေ ထုတ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာ ဂျာနယ်ကျော် ဦးချစ်မောင် ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတခွန်းရှိတယ်။ နဂါးနီစာအုပ်အသင်းက စာအုပ်တွေကကောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရေးတဲ့စာရေးဆရာတွေက ကိုယ်ရေးချင်တဲ့ စာအုပ်တွေကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရေးချင်သလို ရေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ တခါတရံ ကွန်မြူနစ်စနစ်ဆိုလဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နည်းနည်းလေး အဲဒီစာအုပ်တွေ ဖတ်တဲ့အခါ အမှတ်လွှဲမှားသွားခဲ့တာ ရှိတယ်။ အဲဒါ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူ့အယူအဆကပြောတယ် စာအုပ်ကို စနစ်တကျနဲ့ အဆင့်အတိုင်း မထုတ်ခဲ့ဘူး။ ဒီမှာဆို Book series ခေါ်မလား မသိဘူး။ သူ့အဆင့်အတိုင်း စာအုပ်လေးတွေ ရှိတယ်။ ကျနော်တို့က နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့၊ ယဉ်ကျေးမှုစာပေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသိပညာတွေကို စနစ်တကျနဲ့ တဖြည်းဖြည်းချင်း တည်ဆောက်သွားချင်တယ်။ အဲဒီစာအုပ်တွေကို စနစ်တကျနဲ့ ထုတ်ဝေသွားချင်တယ်။ အဲဒီ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထုတ်တာ။ နောက်တခါ မြန်မာက အခုက အပြောင်းအလဲကာလ ဖြစ်တဲ့အခါမှာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတွေးအခေါ်ပိုင်းတွေ လက်ရှိ ခေတ်ပြိုင်ကမ္ဘာမှာ ဖြစ်နေတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို လက်လှမ်းမီဖို့ဆိုရင် ကျနော်တို့ဆီမှာ ကျနော်တို့လို ပုံစံမျိုး စာအုပ်တိုက်တတိုက် လုံးဝရှိသင့်တယ်လို့ ကျနော်တို့ စိတ်ကူးရှိတယ်။
ကိုကျော်ကျော်သိန်း ။ ။ ဆိုတော့ ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေပေါ့။
ကိုထူးကျော်ဝင်း ။ ။ ဘာသာပြန်တွေလည်း ရှိတယ်။ ပင်ကိုယ်ရေးတွေလည်း ရှိတယ်။
ကိုကျော်ကျော်သိန်း ။ ။ ပင်ကိုယ်ရေးဆိုတာက ဥပမာ ကျနော် နားလည်တာက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ပတ်သက်လို့၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့၊ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံနဲ့ ပတ်သက်လို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ မျိုးဆက်ပြတ်ခဲ့တယ်။ ပင်ကိုယ်ရေးအတွက်ကို စာအုပ်ကောင်းကောင်းက စာဖတ်သူအနေနဲ့ အကျိုးများများရှိမယ့်စာအုပ်မျိုး ရေးဖို့၊ ထုတ်ဖို့ အခြေအနေမျိုး ရှိရဲ့  လား။
ကိုထူးကျော်ဝင်း ။ ။ ရှိတယ်ခင်များ။ ကျနော်တို့က စာအုပ်တွေကို ထုတ်နေရုံသက်သက် မဟုတ်ဘဲ။ ကျနော်တို့နဲ့ တွဲပြီးတော့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဥပမာ ကျနော် နည်းနည်းလေး ရှင်းပြချင်တယ်။ ကျနော်တို့က လူ့အခွင့်အရေး နဲ့ ဒီမိုကရေစီဂျာနယ်ကို လစဉ်ထုတ်တယ်။ အဲဒီ ဂျာနယ်ကို ကျနော်တို့က အခုဆိုရင် မြန်မာလွှတ်တော်ကို (၁) လကို အုပ် (၁) ထောင် အမြဲတမ်း ပို့တယ်။ အထောက်အပံ့ပေးတယ်။ မြန်မာလွှတ်တော်မှာရှိတဲ့ လွှတ်တော်စာကြည်တိုက်မှုးနဲ့ ကျနော်နဲ့ အမြဲတမ်း ပုံမှန် အချိတ်အဆက်ရှိတယ်။ သူဆီကို လစဉ် (၁) ထောင် ပို့တယ်။ လွှတ်တော်အမတ်တိုင်းဆီ ရောက်တယ်။ နောက် နိုင်ငံရေးပါတီတိုင်းကို ကျနော်တို့ လစဉ် ပို့ပေးတယ်။ နောက်တခါ အခုဆိုရင် ပြီးခဲ့တဲ့ လေးငါးခြောက်လ က စပြီးတော့ ကျနော်တို့က တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်တွေကိုပါ စပို့တယ်။
ကိုကျော်ကျော်သိန်း ။ ။ ဆိုတော့ (၂) နှစ်ကျော် ကာလအတွင်းမှာ စာအုပ် ဘယ်လောက်လောက် ထွက်ပြီးသွားပြီလဲ။
ကိုထူးကျော်ဝင်း ။ ။ လူ့အခွင့်အရေး နဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဂျာနယ်အနေနဲ့ဆို (၃၀) နီးပါးရှိပြီ။ Myanmar Studies က (၃) အုပ် ထွက်ပြီးသွားပြီ။ နောက် စာအုပ်အမျိုးအစားအနေနဲ့ စာအုပ်ပေါင်း လေးငါးဆယ်လောက် ရှိနေပြီ။
ကိုကျော်ကျော်သိန်း ။ ။ ကျနော် သိသလောက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးလောက က တော်တော်လေးကို အခြေအနေက ဆိုးနေတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် စာဖတ်ပရိသတ် အားနည်းသွားတယ်။ စာကောင်းဖတ်သူ အားနည်းသွားတယ်။ စာဖတ်တဲ့လူ အားနည်းသွားတယ်။ ဒီ MKS က ထုတ်တဲ့စာအုပ်တွေကို ဖတ်တဲ့ ပရိသတ် အခိုင်အမာ ရှိရဲ့ လား။
ကိုထူးကျော်ဝင်း ။ ။ ဖတ်တဲ့ ပရိသတ် အခိုင်အမာရှိလာဆိုတော့ ပရိသတ်ထက်စာရင် ကျနော်တို့က ကျနော်တို့ စာအုပ်တွေကို ရောက်အောင်လုပ်တဲ့ ဖြန့်ချီရေးနည်းလမ်းတခု ရှိထားတယ်။ အဲဒါ ဘာလဲဆိုတော့ အဓိက ပြောချင်တာက လွှတ်တော်ကို (၁) ထောင် ရောက်တယ်။ နောက် NLD ပါတီကို (၂) ထောင် ပေးတယ်။ နောက် တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကို လစဉ် စာအုပ်ပို့တယ်။ နောက်တခါ ဒေါက်တာကျော်သူတို့ လုပ်နေတဲ့ ပေါင်းကူး ကို အုပ် (၂) ထောင် ပို့တယ်။ (၈၈) ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းကို အုပ် (၁) ထောင်လောက် ပို့တယ်။ အဲဒါ ကျနော်တို့ရဲ့  အမြဲတမ်း Partner တွေ ဖြစ်တယ်။
ကိုကျော်ကျော်သိန်း ။ ။ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ နိုင်ငံရေးလောကထဲမှာ ထဲထဲဝင်ဝင် လုပ်နေတဲ့လူတွေဆီကို ရောက်တယ်။ သူတို့ဆီက ဒီစာအုပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြန်ပြီးတော့ စာအုပ်အပေါ်မှာ သူတို့ ဖတ်တဲ့အပေါ်၊ သူတို့သိတဲ့အပေါ် ပြန်ပြီးတော့ အကြံဥာဏ်ပေးတာ၊ ပြန်ပြောတာ အဲဒါမျိုးတွေ ရှိလား။
ကိုထူးကျော်ဝင်း ။ ။ အဲဒါမျိုးတွေတော့ ရှိတယ်။ ရှိတယ်ဆိုတာ ဘယ်လို ပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ စာအုပ်က နည်းနည်းလေးပြောတဲ့အသံမျိုးက ကျနော်တို့စာအုပ်နဲ့ ဂျာနယ်တွေက လေးတယ်လို့ ပြောတယ်။ လေးတယ်လို့ ပြောတာကို ကျနော်တို့လည်း ဝန်ခံတယ်။ တချို့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ရင်းနှီးတယ်လူတွေဆို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတယ်။ ဒီထက် နည်းနည်းလေး ဖတ်ရလွယ်တဲ့ သာမန်အောက်ခြေ လူတွေဆီရောက်တဲ့ဟာ ထုတ်ဖို့ အစီအစဉ် မရှိဘူးလားဆိုတော့ ကျနော်တို့ဆီမှာ အစီအစဉ် မရှိဘူးလားဆိုတော့ အစီအစဉ်ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့က ဘယ်လိုမြင်သလဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်မှာ ဂျာနယ်ပေါင်းက အများကြီး။ နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝအပေါ် နိုင်ငံရေးအခြေအနေအပေါ် ရေးတဲ့ဂျာနယ်တွေ မြန်မာပြည်မှာ အများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ Academic ဆန်ဆန် သေချာသုံးသပ်တဲ့ စာအုပ်ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နည်းနည်းလေး ရှားပါးတယ်။ လေးငါးခြောက်ခုလောက်ပဲ ရှိတယ်။ ကျနော်တို့က အဲဒီအထဲက (၁) ခုအနေနဲ့ ရပ်တည်ချင်တယ်။
ကိုကျော်ကျော်သိန်း ။ ။ အဲဒီ စာအုပ်တွေထဲမှာပါတဲ့ စာတွေ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၊ ရှေ့ ဆောက် နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေး။ အဲဒါမျိုးတွေကို အထောက်အကူပြုတဲ့ စာမျိုးတွေလို ပြောလို့ရလား။
ကိုထူးကျော်ဝင်း ။ ။ ဟုတ်တယ် ပြောလို့ရတယ်။ နည်းနည်းလေး ကျနော်တို့ ဂျာနယ် trend က အားလုံးပေါင်း section တွေ ခွဲထားတာရှိတယ်။ ကျနော်တို့က အမြဲတမ်း Issue ခေါ်မှာပေါ့ ဖြစ်နေတဲ့ ဖြစ်ရပ်၊ လစဉ်ဖြစ်ရပ်ပေါ်မှာ တင်တယ်။ ပထမဦးဆုံးထုတ်တဲ့ Issue ခေါင်းစဉ်ဆိုရင် “အကူးအပြောင်းကာလ တရားမျှတမှု” Transitional Justice အဲဒီကနေ ကျနော်တို့ ဆက်သွားလိုက်တာ အခု နောက်ဆုံး ကျနော် မလာခင်မှာ ထုတ်တဲ့စာဆိုရင် “State Responsibility and Changing Customary and Religious Laws” ထုံးတမ်းဓလေ့နဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေအပေါ်မှာ နိုင်ငံတော်က ဘယ်လို တာဝန်ယူမလဲဆိုတဲ့ Topic. အဲဒါကို ဘယ်လို စီစဉ်လေ့ရှိသလဲဆိုရင် ဆောင်းပါး (၁၆) ပုဒ်လောက် အမြဲတမ်းပါတယ်။ ဆောင်းပါး (၆) ပုဒ်က အမြဲတမ်း အဲဒီ Issue နဲ့ ပတ်သက်တာဖြစ်တယ်။ ကျန်တဲ့ (၁၀) ပုဒ်က လူ့အခွင့်အရေး အယူအဆဆိုတာ ရှိတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး အယူအဆများဆိုတဲ့အောက်မှာ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး၊ ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေး၊ အကျဉ်းသား အခွင့်အရေးဆိုတာတွေ ရှိတယ်။ အဲဒါ အမြဲတမ်း ပုံမှန်ပါတဲ့ Section. ပြီးတဲ့အခါမှာ နောက်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံရေးက ကြာရင်အီသွားမယ်။ နိုင်ငံရေး Issue က ကြာရင် ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ စာပေ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ အနုပညာအပိုင်းကို Change မယ်ဆိုတဲ့ အတွေးကလည်း ကျနော်တို့မှာ စိတ်ကူးရှိတဲ့အတွက်မို့ နောက်ပိုင်းတွေမှာ ဘာထည့်ထားလဲဆိုတော့ Cultural Politics လို့ခေါ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှု နိုင်ငံရေး၊ စာပေသဘောတရားနဲ့ ပတ်သက်တာ၊ Radical Philosophy လို့ခေါ်တဲ့ ယတိပြတ်အတွေးအခေါ်နဲ့ ပတ်သက်တာ အဲဒီအထဲမှာဆိုရင် Nietzsche, Zizek တို့။
ကိုကျော်ကျော်သိန်း ။ ။ စာဖတ်သူတွေ လေးတယ်လို့ပြောတာ အဲဒီစာတွေကြောင့်ပါ။ အဲဒီတော့ ဒီစာအုပ်တွေကို ထုတ်တဲ့အနေနဲ့ MKS က တခြား ဟောပြောပွဲတွေ၊ ဆွေးနွေးပွဲတွေကော လုပ်လား။
ကိုထူးကျော်ဝင်း ။ ။ ကျနော်တို့ဆီမှာ ရှိတယ်။ လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ကျနော်တို့ လေးငါးခြောက်လ က USAID နဲ့ တွဲပြီးတော့ နှစ်လလောက် လုပ်လိုက်သေးတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ နည်းနည်းလေး USAID နဲ့ ကျနော်တို့ကြားမှာ ညှိလို့မရဟာလေးတွေကြောင့် ကျနော်တို့ အဲဒီစာချုပ်ကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်တယ်။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုတော့ Outreach Program နယ်တွေမှာသွားပြီးတော့ မြို့  (၆) မြို့ မှာ တလ (၁) မြို့ နဲ့ MKS ကျနော် အပါအဝင်၊ အယ်ဒီတာအဖွဲ့က ကိုယ်ရေးခဲ့တဲ့ ကိုယ့်သက်ဆိုင်ရာ Subject တွေကိုယူတယ်။ ကျနော်ဆိုရင် လူ့အခွင့်အရေးပိုင်းကိုယူတယ်။ အယ်ဒီတာ မင်းခက်ရဲ က နိုင်ငံရေးဒဿန ယူပြီးတော့ Outreach Program နဲ့ လုပ်ခဲ့ဖူးတာ နှစ်မြို့ သုံးမြို့ ရှိတယ်။ ပြည်နဲ့ မန္တလေး မှာ လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။
ကိုကျော်ကျော်သိန်း ။ ။ ကိုထူးကျော်ဝင်းတို့က လူငယ်တွေအနေနဲ့ ဒီလောက်အထိ ရှေ့ ကိုမျှော်ပြီးတော့ လုပ်နေကြတယ်ဆိုတော့ ဒီကနေ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  အခြေအနေအရပ်ရပ် နိုင်ငံရေး ရှေ့ အလားအလာ၊ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲလာမယ်။ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသံတွေ အများကြီး၊ အခြေအနေတွေ အများကြီး ကျနော်တို့ သိနေကြတယ်။ ကိုထူးကျော်ဝင်းအနေနဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေက မြန်မာနိုင်ငံက ဒီထက်ကောင်းတဲ့ဘက်ကို ဦးတည်ဖို့ အလားအလာ ရှိပါလား။
ကိုထူးကျော်ဝင်း ။ ။ ကျနော်ရဲ့  ပုဂ္ဂလိက အမြင်နဲ့ပဲ ပြောပါမယ်။ အဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စားမပြုဘဲနဲ့ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  အလားအလာက အခုလက်ရှိ ပုံစံအတိုင်း သွားနေမယ်ဆိုရင်တော့ စစ်အစိုးရပြောပြော၊ လက်ရှိအစိုးရရဲ့  ကောင်းချင်းဆိုးချင်းကို တပိုင်းထားလိုက်မယ်ဆိုရင် လူတွေဟာ ဒီအတိုင်းပဲ ဆက်သွားမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့အတွက် အလားအလာ သိပ်မကောင်းနိုင်ဘူးလို့ ထင်တယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီကို ရောက်လာတဲ့အခါ နည်းနည်းသိလိုက်ရတာ ရှိတယ်။ ကျနော်တို့မှာ စနစ်ကျတဲ့ Institution အဖွဲ့အစည်းတွေ အဲဒီလို အဖွဲ့အစည်းတွေ အရမ်းလိုအပ်နေတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံရေးမှာ အကူးအပြောင်းကာလ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ လူတွေဟာ ပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတယ်။ အစိုးရ၊ ပြည်သူ ရင်ဆိုင်ရတယ်။ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ အခြေအနေမှာ တခါတလေ ကျနော် စိုးရိမ်မိတာက မြန်မာစကားပုံ ဆန်စင်ရာ ကျည်ပွေ့လိုက်တယ် ခေါ်တာပေါ့။ အဲဒီလိုမျိုး များပြားတဲ့ ပြဿနာတွေကို လိုက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေမယ့်အစား အဓိက အရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့ Democratic Value ခေါ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ တန်းဖိုးစံတွေ၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းတရားတွေပေါ်မှာ လူတွေရဲ့  အသိမှုဘက်ကို ပညာပေးမှု တနည်းအားဖြင့် အဲဒီလူတွေရဲ့  Level တက်လာအောင် မလုပ်မိဘူးဆိုရင် ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီကလဲ အရှေ့ တောင်အာရှတွေရဲ့  ထုံးစံအတိုင်း ခဏနေရင် စစ်တပ်က အာဏာပြန်သိမ်း။ နိုင်ငံပြန်တည်ဆောက်တဲ့ တဝဲလယ်လယ်ထဲ ရောက်သွားမှာကို စိုးရိမ်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ …
ကိုကျော်ကျော်သိန်း ။ ။ အဲဒီလိုမျိုး တည်ဆောက်ဖို့၊ ဒီမိုကရေစီ အလေ့အကျင့်နဲ့ ဒီမိုကရေစီကို သိနားလည်တာတွေ၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လိုက်နာကျင့်သုံးတာတွေ အဲဒီလိုမျိုး လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အခြေအနေ အခုအခြေအနေက ရှိရဲ့ လား။
ကိုထူးကျော်ဝင်း ။ ။ အခု ကျနော်တို့ စာအုပ်တိုက်အနေနဲ့ ပြောရင်တော့ တော်တော်လေးကို အားရစရာကောင်းတဲ့ အနေအထားမျိုး၊ စာအုပ်တွေကို အကြောင်းအရာပေါင်းစုံ ထုတ်ခဲ့ပြီးပြီ။ ရောက်တယ်လို့လဲ ကျနော် ယုံကြည်တယ်။ တခုရှိတာက မြန်မာပြည်ရဲ့  စာအုပ်အနေအထားကတော့ သိတဲ့အတိုင်း စာပေလောက အနေအထားက စာဖတ်အားနည်းနေတယ်။ လူတွေရဲ့  စာဖတ်ရှိန်ကို မြှင့်တင်နိုင်ဖို့ လိုတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ တတ်နိုင်သလောက် ထုတ်တဲ့စာအုပ်တွေကို အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ တကယ်ကို အဲဒီ Field ထဲမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေ လူငယ်လူရွယ် လူကြီးမရွေး ရောက်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားနေတယ်။ နောက်ထပ်လဲ ကျနော်တို့ ဒါရိုက်တာအပါအဝင် ကျနော်တို့အဖွဲ့ ညှိနှိုင်းပြီးတော့ နောက်ထပ် (၃) နှစ်လောက်ကို ပြင်ပြီးတော့ စာအုပ်တွေ ဒီထက်မက ပိုပြီးတော့ စနစ်ကျတဲ့ စာအုပ်တွေထုတ်ဖို့ Project ဆွဲထားတာ ရှိပါတယ်။
ကိုကျော်ကျော်သိန်း ။ ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ အချိန်ပေးပြီး ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်။
ကိုထူးကျော်ဝင်း ။ ။ကျနော်လည်း ဗွီအိုအေ ကို အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
MKS အယ်ဒီတာ ကိုထူးကျော်ဝင်းနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း